Nasehony fa Ilaina ny Mivavaka sy Manetry Tena | Fiainan’i Jesosy
Tena Ilaina ny Mivavaka sy Manetry Tena
FANOHARANA MOMBA ILAY MPITONDRATENA BE FIKIRIZANA
Efa nisy fanoharana nolazain’i Jesosy mba hampirisihana ny mpianany ho be fikirizana rehefa mivavaka. (Lioka 11:5-13) Nilaza fanoharana hafa izy mba hanamafisana fa ilaina ny tsy mitsahatra mivavaka. Tao Samaria na Galilia angamba izy tamin’izay.
Hoy izy: “Nisy mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra sady tsy mena-maso olona, tao amin’ny tanàna iray. Ary nisy vehivavy mpitondratena koa tao, izay nandeha tany aminy foana, nanao hoe: ‘Mba ataovy re izay hahazoako rariny amin’ilay manana ady amiko any amin’ny fitsarana e!’ Tsy nety ilay mpitsara, nandritra ny fotoana elaela. Tatỳ aoriana anefa, dia hoy izy anakampo: ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra sy tsy mena-maso olona aza aho, dia homeko rariny ihany io vehivavy io fa manelingelina ahy tsy misy farany. Amin’izay dia tsy ho tonga lava eto hanorisory ahy izy ka tsy ho zakako intsony.’ ”—Lioka 18:2-5.
Nanazava i Jesosy avy eo hoe: “Henoy izany tenin’ilay mpitsara izany, nefa izy olona tsy marina. Tsy hataon’Andriamanitra tokoa ve izay hampiharana ny rariny amin’ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, na dia mahari-po amin’ireo aza izy?” (Lioka 18:6, 7) Inona àry no tian’i Jesosy haseho momba ny Rainy?
Tsy te hilaza i Jesosy hoe mitovy amin’ilay mpitsara tsy manao ny marina i Jehovah. Te hilaza kosa izy hoe: Raha ilay mpitsara tsy manao ny marina aza namaly ny fangatahan’ilay mpitondratena rehefa tsy nitsahatra nangataka izy io, tsy mainka ve fa Andriamanitra! Manao ny marina sy tsara fanahy izy, ary hamaly ny vavaky ny mpanompony raha tsy mitsahatra mivavaka izy ireo. Hoy mantsy i Jesosy: ‘Lazaiko aminareo fa hataon’Andriamanitra haingana izay hampiharana ny rariny amin’izy ireo.’—Lioka 18:8.
Matetika no tsy omena rariny ny olona ambany sy ny mahantra, fa ny manana fahefana sy ny manankarena no omena tombony. Tsy manao toy izany Andriamanitra. Hanao ny rariny izy amin’ny fotoana mety, ka hosaziny ny ratsy fanahy fa homeny fiainana mandrakizay ny mpanompony.
Iza no manam-pinoana toy ny an’ilay mpitondratena? Firy no tena mino fa ‘hataon’Andriamanitra haingana izay hampiharana ny rariny amin’izy ireo’? Vao avy nilaza fanoharana i Jesosy mba hampisehoana fa ilaina ny tsy mitsahatra mivavaka. Hoy koa izy: ‘Rehefa tonga ny Zanak’olona, tena hahita finoana toy izany etỳ an-tany ve izy?’ (Lioka 18:8) Te hilaza izy fa mety ho vitsy no tena hino hoe manan-kery ny vavaka, rehefa ho tonga i Kristy.
Nihevitra ny olona sasany nihaino an’i Jesosy fa efa nanana finoana matanjaka. Nihevi-tena ho marina izy ireo ary nanambany ny hafa. Nilaza izao fanoharana izao tamin’izy ireo i Jesosy:
“Nisy roa lahy niakatra nankao amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny anankiray Fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Dia nitsangana ilay Fariseo ka nivavaka anakampo hoe: ‘Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba toy ny olon-kafa rehetra izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na toa an’itsy mpamory hetra itsy akory aza. Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary manome ny ampahafolon’ny zava-drehetra azoko.’ ”—Lioka 18:10-12.
Nalaza ho niseho ho marina sy tia nampiseho izany teny imasom-bahoaka ny Fariseo. Te hanaitra ny hafa izy ireo. Isaky ny alatsinainy sy alakamisy izy ireo no nifady hanina satria ireo no andro tsena, ka maro no nahita azy. Nanome ny ampahafolon’ny zavamaniry madinika mihitsy aza izy ireo. (Lioka 11:42) Nampiseho ny fankahalany ny sarambabem-bahoaka ny Fariseo, volana vitsivitsy talohan’izay. Nilaza izy ireo fa “olom-boaozona ireo vahoaka tsy mahalala ny Lalàna [ny fanazavan’izy ireo ny Lalàna].”—Jaona 7:49.
Hoy ihany i Jesosy: “Nijoro lavidavitra kosa ilay mpamory hetra, ary tsy sahy niandrandra ny lanitra, fa nikapo-tratra foana ka nanao hoe: ‘Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota.’ ” Nanetry tena sy niaiky fahadisoana izy. Hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo fa izany lehilahy izany no hita fa marina noho ilay anankiray, rehefa nidina tany an-tranony. Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”—Lioka 18:13, 14.
Nasehon’i Jesosy mazava àry fa ilaina ny manetry tena. Tena nilain’ny mpianany izany, satria mpanamarin-tena ny Fariseo teo amin’ilay fiaraha-monina nahalehibe azy ireo sady nanasongadina toerana ambony. Mila manetry tena koa izay rehetra manara-dia an’i Jesosy.
Inona no tian’i Jesosy hampitaina tamin’ilay fanoharany momba an’ilay mpitsara sy mpitondratena?
Inona ilay finoana tian’i Jesosy ho hita rehefa ho tonga izy?
Inona ilay toetra mampiavaka ny Fariseo nefa tsy tokony hananan’ny mpanara-dia an’i Jesosy?
Nahoana no misy vavaka tsy ankasitrahan’Andriamanitra? Inona no tokony hataonao raha tianao hihaino anao izy?
Vavaka manao ahoana no tsy valian’Andriamanitra, ary olona manao ahoana no tsy henoiny?
Hizara Hizara Tena Ilaina ny Mivavaka sy Manetry Tena